သက်ဝေ: ရင်ထဲက ဆူး
Posted by သက်ဝေ at 8:30 PM
Phyo Evergreen April 13, 2009 at 8:57 PM
pandora April 13, 2009 at 8:58 PM
ကိုယ်လုပ်ချင်တာဘာလဲ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်တတ်တာ ကျွမ်းကျင်တာဘာလဲ ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း သိဖို့ လုပ်လည်းလုပ်ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ကြီးမားတဲ့ ကိစ္စပဲ။ လူအတော်များများအတွက် မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်။
khin oo may April 13, 2009 at 9:45 PM
ကိုယ့်ဆန္ဒလေးတွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် မဖေါ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာ သော်လည်းကောင်း ရင်ထဲမှာ အလိူမကျစိတ်လေးတွေ၊ မကျေနပ်စိတ်လေးတွေ၊ အစိုင်အခဲလေးတွေ အနည်းနဲ့ အများ ဖြစ်လာတတ်ကြသည်။
khin oo may April 13, 2009 at 9:46 PM
မီယာ April 13, 2009 at 10:53 PM
ဆူးတွေ အများကြီး စူးခံပြီးနေလို့ ထုံနေပြီ မသက်ဝေ... ကိုယ့်ဘာသာ ဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိ ယောင်နန ဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့...
Moe Cho Thinn April 14, 2009 at 2:36 AM
မိဘတို့ ချစ်သူတို့ လုပ်စေချင်တာတွေ ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့စဉ်ကလဲ သေသေချာချာ လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အကျိုးရှိတဲ့ ဆူးလေးတွေလို့ သတိရရင် စိတ်သက်သာမယ် မမရေ။
ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်မှာလဲ မမ အခု ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ စာဖတ် စာရေး လုပ်နေတာပဲလေ။ တခါတလေကျတော့လဲ ဘ၀ကို မျှအောင်လုပ်ရတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက် ကောင်းတယ် ထင်မိတယ်။
ချိုသင်းလဲ အခုတလော အလိုမကျတာတွေ၊ ၀မ်းနည်း လွယ်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ သိပ်မော နေလို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ အားပေးသွားပါတယ် မမရေ..
မေငြိမ်း April 14, 2009 at 7:27 AM
စဉ်းစားကြည့်ရင်.. ခုဘလော့ရေးနေတာလေးက ၀ါသနာပါတာလေးတခုကို လုပ်ခွင့်ရနေတာပဲ မဟုတ်လား ဒေါ်သက်ဝေရဲ့.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... :P
သက်ဝေ April 14, 2009 at 9:11 AM
အားပေးသွားကြသူများ အားလုံး ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်...
အခုတလော ဟိုဟာတွေ ပူရ ဒီဟာတွေ ပူရ၊ စိတ်မော လူမောနဲ့မို့ စာကောင်းကောင်း မဖတ်နိုင် မရေးနိုင်၊ ရေးမိပြန်တော့လဲ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ မဟုတ်ပြန်ဘူး... စာလာဖတ်သူတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာ ဆောရီးပါ။
နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် စာရေးပုံ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ရေးချင်တဲ့ အချက်နဲ့ ရေးလိုက်မိတာနဲ့က တခုခုတော့ လွဲနေသလိုလဲ ခံစားမိပါသေးတယ်..။ ပြောချင်တာကို လိုရင်း မရောက်ပဲ မဟုတ်တာတွေ ရေးလိုက်မိသလိုလဲ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်...။
ဖြိုး... ဟုတ်ပါတယ်... တကယ်ကိုပဲ ရိုးရှင်းတဲ့ ဘဝလေးမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းလေးသာ အမြဲတမ်း နေချင်ပါတယ်...
ပန်ပန်... တကယ်မလွယ်တာပါ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာသိဖို့က ပိုလို့တောင် မလွယ်သေး...
မမခင်ဦးမေ... အမ မေးတာ ဖတ်ရတာ ကြောက်တောင်ကြောက်တယ်... ဟီးဟီး.. "သက်ဝေက ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ တဲ့..." ထရိုက်တော့မလိုပဲ...
သက်ဝေ ဘာမှ မဖြစ်ချင်ပါဘူး မမရယ်... စိတ်ညစ်တုံး ရေးမိတဲ့ စာမို့ပါ...။
မီယာ... ကိုယ့်ဘာသာ ဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိ တာ အဆိုးဆုံးပါ ညီမရေ...
ချိုသင်း... အခါများစွာမှာတော့ ညီမပြောသလိုပဲ ဆူးတွေကို ဆူးလို့တောင် အမှတ်မထားခဲ့မိပါဘူး။ တခါတလေကျရင်သာ... ရင်ထဲကို ရောက် ရောက်လာတတ်တာမျိုးပါ...။
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ချိုသင်းရေ...
ဆရာမ... လာလည်တာကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်ပါတယ် အခုလဲ ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးကို နဲနဲ နဲနဲတော့ လုပ်နေနိုင်တယ် ထင်ပါတယ်...။ ဒါကိုပဲ ကျေနပ်နေပါတယ်...
အလည်လာပြိး စီဘောက်စ်မှာ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ အမ ခင်မင်းဇော်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ အမခင်မင်းဇော်ရေ... တွေးထားတာနဲ့ ရေးလိုက်တာနဲ့က တလွဲတွေဖြစ်နေတော့ အထင်လွဲစရာတွေ အတွေးပွားစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီထင်တယ်... ဝတ္တုတိုလို့တော့ Label တပ်ထားတာပဲ... ပျော်စရာ မိသားစုကလေးနဲ့ အတူတူ ကိုယ့်ဝါသနာပါတာလေး နဲနဲလုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ ဘဝမှာ နေပျော်ပါတယ်...။
ပုံရိပ် / Pon Yate April 14, 2009 at 9:25 AM
မသက်ဝေ... အဲဒါလူတော်တော်များများအတွက် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေပဲ ထင်တယ်။ တခါတလေ ၀ါသနာအတွက် အချိန် ပေးကို ပေးမှပဲ လုပ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
တန်ခူး April 14, 2009 at 3:24 PM
ဆူးလေးတွေကို ထွင်ပစ်လိုက်နော်… ဆူးတွေများလာရင် ဒဏ်ရာတွေ ကြီးသွားတတ်တယ်…
တို့ ကတော့ ဆူးစူးလိုက် ထွင်လိုက်နဲ့ … တခါတခါ ဆူးအကြီးကြီးတွေဆို နင့်ကနဲပဲ…
သက်ဝေရေ… နှစ်သစ်မှာ စံပယ်ပွင့်လေးလို ဆူးတွေကင်းစင်ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ….
Hmoo April 14, 2009 at 5:33 PM
Cute, let me know what U want to do?
tg.nwai April 14, 2009 at 8:09 PM
သက်ဝေရေ..တခါတလေ..လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်ခွင့်ရတာနဲ့ မကိုက်တဲ့အခါ..မလုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေရတဲ့အခါ..ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်လို့ လုပ်ချင်နေမှန်းမသိဖြစ်တဲ့အခါ အလိုမကျဖြစ်တာမျိုးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်ဝေဘ၀လေးက ငြိမ်းချမ်း ပြည့်စုံနေတာပဲလေ..။ အခုပဲကြည့်.. ဆူးထွင်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လား သက်ဝေရဲ့ :)
ကလူသစ် April 14, 2009 at 10:23 PM
ဆူးတွေ ဘာတွေလုပ်မနေနဲ့... ဟောဒီမှာ လာပြီ... ဗွမ်း ဟမ်း ဟမ်း
T T Sweet April 14, 2009 at 10:59 PM
မသက်ဝေကို ... အိမ်ထောင့်တာဝန် အလွန်ကျေပြွန်သော အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်မိပါသည်။ အလွန်ပဲ ချီးကျူးလေးစားပါသည်။ ၀ါသနာပါရာ စာရေးစာဖတ် လုပ်နေတာပဲလေ။ ဆူးကိုနှုတ်ပစ်လိုက်တော့နော်။
အရင်းကြီး စာရေးဒီလောက်ကောင်းမှန်း တကယ်မသိခဲ့ဘူး။ စစတွေ့တော့ အရင်းကြီးဆိုပြီး ပဟေလိဖွက်တာ သတိရသွားလို့ :)နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
PAUK April 14, 2009 at 11:36 PM
နောင်နှစ်အတွက် သင်္ချာတွေ တွက်နေရတယ်ဆိုတာကို...အားကျတယ်..
မသက်ဝေကို မိဘတွေက ငယ်ကတည်းက
အဲ့ဒါ ဘ၀ ပဲလားမသိပါဘူးနော်..
သက်ဝေ April 15, 2009 at 3:00 PM
ပုံရိပ်ရေ... ဟုတ်ပါတယ်။ လူသားပီပီ တခါတလေမှာတော့ အတ္တဆူးလေးတွေ ပေါ်လာတတ်တာမျိုးပါ...။
တန်ခူး... ကျေးဇူးပါ။ စူးနေတဲ့ ဆူးတွေကို ထွင်လိုက်ပါပြီ... ကိုယ်ရေးလိုက်တာ သူများတွေကို တွေးစရာတွေ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ပေးလိုက်သလိုပါပဲ... နဲနဲ အတ္တများသွားတယ်... အခုတော့ ရော့သွားပါပြီ။ တန်ခူးတို့ မိသားစုလဲ နှစ်သစ်မှာ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...။
ကိုမှုး... ဟီးဟီး.. အခုတော့ ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ဟိုနေ့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်တိုနေလို့ပါ...။
မသိင်္ဂီပြောတာနဲ့ တကယ်ကို ကွက်တိပါပဲ…။ သေသေချာချာခံစားပြီး နားလည်ပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေကြောင့် အခုတော့ ဆူးတွေလဲ မရှိတော့ပါဘူး။ နှစ်သစ်မှာ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့ပါစေ...။
အေးတယ်.. အေးတယ်…။ ရေလာလောင်းတာ ကျေးဇူးပါ။ TZA က လူသစ်နဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုရမယ်ဆိုလို့ ကလူသစ်ကို လိုက်ရှာနေတာ… တွေ့ပြီ.. တွေ့ပြီ… သူပဲ… သူပဲ… ဟားဟားဟား…
ဆွီတီ… အင်း ဂလောက်ကြီးလဲ အထင်မကြီးပါနဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်…။ ကိုယ်လဲ သူလိုကိုယ်လို သာမန်လူ တယောက်ပါပဲ…။ ဒါကြောင့်သာ ဆူးတွေ ရောက် ရောက်လာတယ်လို့ ခံစား နာကျင်နေတာပေါ့…။ အခုတော့ ကောင်းသွားပါပြီလေ…။ သူငယ်ချင်းတို့ မိသားစုလေးလဲ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်…။
ချစ်ပေါက်… စဉ်းစားစရာတွေ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပြောမိတာ ဆောရီးပါ ပေါက်ရေ…။ ဘဝ ဆိုတာမျိုးကတော့ တခါတခါမှာ လိုချင်တာနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတာ တထပ်ထဲ မကျတတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ယောနိသော မနသီကာရ ဆိုသလို အရာရာကို အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အများကြီး နေပျော်ပါတယ်။ ဒါတွေကို သိသိကြီးနဲ့ အတ္တတရားတွေ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ရေးမိတဲ့ ပိုစ့် အတွက် နောင်တတောင် ရနေမိပါတယ်...။
အမှန်မြင်အောင် အားပေးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
nu-san April 16, 2009 at 11:47 AM
မမသက်ဝေရေ..စိတ်ညစ်တာတွေ ပျောက်သွားအောင် ရေလာလောင်းတယ်.. ဟဲဟဲ.. ပုန်းမနေနဲ့နော်.. ဗွမ်း.. :D
မမရေ.. နောက်မှ စာလာဖတ်တော့မယ်.. ရုံးမှာမို့ cbox က မမြင်ရလို့ comment ပဲရေးခဲ့ရတာ.. ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာမို့ sorry ပါနော် အမ.. :)
nu-san April 16, 2009 at 7:31 PM
မမသက်ဝေ ဘ၀က အေးချမ်းတယ်နော်.. သိပ်ပြီး အပူအပင်မရှိတာ ကောင်းတာပေါ့ အမရယ်.. ကျွန်တော်လည်း အတူတူပါပဲ.. ၀ါသနာပါတာနဲ့ လုပ်ရတာတွေက တခြားစီပဲ.. အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းစာက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းစာပဲ လုပ်ခဲ့ရတာ.. မမလည်း အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း တက်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်.. :)
sonata-cantata April 20, 2009 at 6:44 PM
တခါတခါ ဘာရယ်မဟုတ် အဲ့လိုပဲ ညစ်တယ် သက်ဝေရ...ဘလော့ပေါ် အန်ချ (စကားလုံးကတော့ နည်းနည်း ညစ်တယ်။ ရင်ဖွင့်လို့ သုံးရင်တော့ ညင်သာသပေါ့လေ) လိုက်ရရင် သက်သာ သွားတယ်။ (ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာအောင် ပျောက်သွားမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ)။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ဆိုတာကြီးထဲပဲ ထိုးထည့်လိုက်တော့မယ်ကွာ။
Hmu July 28, 2009 at 11:20 AM